ओलीले पाउलान् त विश्वासको मत? « AayoMail
ओलीले पाउलान् त विश्वासको मत?
ट्याक्टर दुर्घटनामा सहचालकको मृत्यु
काठमाडौं – बागलुङमा आज बिहान ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा सहचालकको मृत्यु
कोरोना खोपको चरम अभावले गरिब देश संकटमा :…
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले गरिब देशमा कोरोनाविरुद्धको खोपको अभाव
कोपा अमेरिका : अर्जेन्टिना लगातार दोस्रो खेलमा विजयी,…
काठमाडौं – कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिनाले लगातार दोस्रो जित निकाल्दा उरुग्वे
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आह्वान गरेको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आज बस्दै छ। दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले लिने विश्वासको मतका लागि आजै मतदान गर्ने गरी कार्यसूची तय गरिएको छ।
ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न १३६ मत चाहिन्छ।
उनको दल नेकपा एमालेका १२१ सांसद छन्। विश्वासको पक्षमा मतदान गर्न उसले ह्विप जारी गरेको छ। तर, पार्टीभित्र विवाद चलिरहेकोले एमालेको सबै मत ओलीले पाउनेमा संशय छ। यद्यपि, विवाद मिलाउन ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेताहरु निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विश्वासको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। संसदीय दलबाटै निर्णय गरिसकेको कांग्रेसको मत विश्वासको पक्षमा नजाने पक्का छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ६१ सदस्य छन्।
यसैगरी माओवादी केन्द्रले हालै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ। सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको माओवादी केन्द्रको मतपनि ओलीले पाउने सम्भावना छैन। माओवादी केन्द्रका ४१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भने पक्ष वा विपक्षमा मत दिनेबारे सांसदहरुको स्वविवेकमा छोडेको छ। आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले तटस्थ, पक्ष वा विपक्षमा बस्ने निर्णयका लागि सांसदहरुलाई स्वतन्त्र छोड्ने निर्णय गरेको हो।
यद्यपि, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पक्षमा मत नदिने सर्वसम्मतिले भएको र तटस्थ वा विपक्षमा दिने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सांसदहरुलाई दिइएको बताएका छन्। संसदमा जसपाका ३२ सांसद छन्।
यता सत्तारुढ नेकपा एमालेका सबै सांसदले विश्वासको पक्षमा मत दिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत पुर्‍याउन चुनौति देखिएको छ।
काठमाडौं – बागलुङमा आज बिहान ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा सहचालकको मृत्यु भएको छ। बागलुङ नगरपालिका–३ रात्माटामा ध१च ८३ नम्बरको ट्याक्टर सडकबाट
कोरोना खोपको चरम अभावले गरिब देश संकटमा : डब्ल्यूएचओ
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले गरिब देशमा कोरोनाविरुद्धको खोपको अभाव भएको बताएको छ। उसले ती देशहरुमा देखिएको खोप अभावले खोप
कोपा अमेरिका : अर्जेन्टिना लगातार दोस्रो खेलमा विजयी, उरुग्वे र…
काठमाडौं – कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिनाले लगातार दोस्रो जित निकाल्दा उरुग्वे र चिलिले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। आज बिहान सम्पन्न
काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा आजदेखि थप खुकुलो, निजी र ट्याक्सीमा जोरबिजोर
कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरण हुँदै गएपछि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो पार्दै आजदेखि निजी सवारी साधान तथा ट्याक्सीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू